Shaqaalaha Garoonka Diyaaradaha Ee Nairobi Oo Shaqo Joojin Sameeyay. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Shaqaalaha Garoonka Diyaaradaha Ee Nairobi Oo Shaqo Joojin Sameeyay.
On Mar 7, 2019 206 0
Ciidamada Police-ka oo eryaya Shaqaalaha banaanbaxa dhigaya.
Garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairoobi, Joma Kenyata, ayaa waxaa ka jira xaalad cakiran, kadib markii ay shaqo joojin ku dhawaaqeen shaqaalaha madaarkaasi. Kumanaan Musaafur oo doonayay iney ka duulaan garoonka Joma Kenyata ayaa ku xayiran gudaha, waxaana jirin wax adeeg ah oo gebi ahaanba ka socda garoonka.
Shaqaalaha ayaa dalbaday in loo kordhiyo mushaaraadka, inta taa laga dhaqan galinayana aysan jiri doonin wax shaqo ah oo ay qaban doonaan. Ciidamada la dagaalanka Qul-qulatooyinka ee dowladda Kenya ayaa isku dayay iney kala eryaan shaqaalaha oo dibad bax ka dhigayay gudaha garoonka, balse way ku guul dareysteen, waxaana markii dambe soo xoojiyya ciidamada la dagaalanka waxa loogu yeero Argagaxisada.
Ciidamadan ayaa hubka ay wateen ku fiiqay shaqaalaha rayidka ee dibad baxa dhigayay, waxaana ay qabteen dhowr ruux oo kamid ahaa hormuudka dadkaasi. Sawirro lagu baahiyay baraha Internetka ayaa muujinaya ciidamadan oo si adag oo qallafsan ula dhaqmaya dadkooda, waxaana shacabka Kenya ay is weydiiyeen iney iyagu noqdeen dadka lagu tilmaamo “Argagaxisada” ee ay ciidamadani dagaalka kula jiraan.
Baraha Twitterka oo ay aad u isticmaalaan shacabka Kenya ayay ku qorayaan hadallo ka dhan ah dowladdooda iyo iney ku fashilantay maareynta arimaha dadweynaha.
Banaanbaxyadan cabashada ah ee ay dhigayaan shaqaalaha garoonka diyaaradaha Joma Kenyata ayaa imaanaya, xilli dhawaan xog uruurin la sameeyay lagu ogaaday in 82% shacabka Kenya aaney ku kalsooneyn madaxda talada heysa, iyadoona 40% ay aaminsanyihiin in madaxdooda ay yihiin kuwa musuq maasuq badan.
Joma Kenyata ayaa ah garoonka ugu weyn ee dalka Kenya, waana garoonka afaraad ee ugu ballaaran qaaradda Africa kaasoo loogu magac daray madaxweynihii hore ee dalkaas. Xukuumadda ayaa waxaa madaarkan kasoo gala dhaqaale ballaaran.